Shayela @ + 91-993.702.7574 ukwazi i-15 yethu kwi-25 I-Tempt Price Price Traveler eBhubaneswar
Ukukhangela uhambo lokungabikho kwinqwelo ekuya kuyo, eBhubaneswar? Iintlanzi zeNtsantyamboI-ac Tempo Ixabiso leendwendwe eBhubaneswar ngokungathandabuzekiyo lihle kakhulu. Inkonzo oyifumanayo iyona nto ihamba phambili kwisixeko. Ukuqasha Umhambi weMpofu yindlela enhle yokuhamba ukuba ukhona bahamba ngeqela. I-Tempo Umhambi unokuba yizithuthi eziphambili zokuhamba emfutshane / elide okanye nayiphi na enye ityelelo. I-Sand Pebbles 'inikezela ngexabiso elihle leTempo Traveler eBhubaneswar. Sinikela ngeendidi ezahlukeneyo zokuhamba ngeTata Winger 15, 17, 19, i-21 izihlalo. Iqela lethu liyakunceda uceba uhambo lwakho olugqibeleleyo ngaphandle kokuphazamiseka. Abaqhubi bethu banolwazi olunzulu, ukuqinisekisa ukuba uhambo luhamba kakuhle. Hlola ixabiso lempahla yabahambi kwiBhubaneshwar ukufumana uluvo lweenkonzo zethu. Sibeka ingcamango eninzi kunye nomgudu wokwaneliseka kwabathengi ukuze bakwazi ukufumana uhambo olukhululekile nolulonwabo.
Odisha yokutyelela okokuqala? Okanye unomhla wokubona indawo? Kufuneka uqeshe umhambi we-25 Seater Tempo xa uhamba ngeqela. Ngenxa yobuninzi bokubona ku-Odisha, ukuqesha umhambi we-Tempo yindlela efanelekileyo yokuhamba kwaye ubone yonke into. Qinisekisa ukhuseleko lwakho kunye nentuthuzelo, ngexesha lohambo, ekubeni zonke izithuthi zihlolwa kakuhle phambi kokuqeshisa.
I24 ngeyure Inkonzo- Sinikeza inkonzo yeeyure ze-24 kubo bonke abathengi bethu, ngaphandle kokulibaziseka. Singomnye weTem Traveler ehamba phambili kwiBhubaneswar, enika iinkonzo eziphezulu kumakhasimende ethu.
U mgangatho- Sisoloko sizinikezele ekukhonzeni abathengi bethu ngokunyaniseka okukhulu. Zonke i-Tempos zethu ziinkwenkwezi ze-5 zilinganisiwe. Siyena kuphela yenkampani yokuthutha abantu kwiIndiya kunye negalelo leenkonzo zokugqwesa ngamakhasimende nge-European Foundation yoLawulo loLawulo.
UQeqesho noQeqesho- Siqinisekisa ukuba abaqhubi bethu baqeqeshwa kakuhle kwaye bavavanywa phambi kokunikezelwa kwabasebenzisi. Siqinisekisa ukuba abaqhubi bethu banokuqeqeshwa koNcedo lweZibungozi kwiingozi eziphuthumayo. I-tempo nganye ihlolwe ngaphambi kokushiya indawo yethu.